Nje ukuba uthathe isigqibo sokuyisebenzisa | IHolo yeWadi yeWadi Aplico
Xa usebenzisa iholo enkulu, iholo encinci, kunye negumbi lokubonisa
Okanye xa usebenzisa izibonelelo kwiindawo zolonwabo ezibonakala ziyimfuneko kulawulo lwezixhobo, unethemba lenyanga enye ngaphambi komhla wokusetyenziswa njengomthetho jikelele uzisa la maxwebhu alandelayo, nceda uye kunobhala wenkundla nakwiintlanganiso.
Inkqubo okanye itshathi yenkqubela phambili, iphetshana lesicwangciso, isicwangciso sokhuseleko, itikiti lokwamkelwa okanye itikiti elinenombolo (njengesampulu)
Ukongeza koku kungasentla, iminyhadala yeholo enkulu ibandakanya umzobo weqonga, umzobo wokukhanyisa, kunye nomzobo we-acoustic.
Xa usebenzisa istudiyo
Iimpahla azinakuthengiswa kwisitudiyo
Ukusetyenziswa komlilo, njl. Icandelo lokuthintela iSebe leMlilo laseKamata
2-28-1 Kamatahoncho, Ota-ku Ifowuni: 03-3735-0119
Ukhuseleko njl. Isikhululo samaPolisa saseKamata
2-3-3 Kamatahoncho, Ota-ku Ifowuni: 03-3731-0110
Ukuthumela izaziso / izaziso
Nceda usazise ukuba ufuna ukuthumela iplanga.
Ngomhla wosetyenziso, nceda ubonise ifom yokuvunywa kokusetyenziswa kwindawo yokwamkela ngaphambi kokusebenzisa igumbi.
Ukulungiselela ukwenzeka kwentlekele, nceda uthathe onke amanyathelo anokubakho njengokukhokelwa ngobungxamo kwabahambi, unxibelelwano olungxamisekileyo, uncedo lokuqala, njl.
Kukho igumbi labantwana kumgangatho wokuqala.Ukuba ufuna ukuyisebenzisa, nceda wazise abasebenzi.Nceda uyilawule kwicala lomsebenzisi.
Emva kokusetyenziswa, nceda ubuyisele izixhobo ezisetyenzisiweyo kwimeko yokuqala.Ukongeza, nceda uqiniseke ukuba ugoduka nezinto zakho uze ungazishiyi apho.
Ngokomgaqo, ukuba indawo okanye izixhobo zonakalisiwe okanye zilahlekile, kuya kufuneka ubuyekeze ngomonakalo.
Nceda usebenzise ivumba elisebenza ewadini phantsi kwendawo yokupaka (umda wobude 2.1 m).
Umququzeleli uya kuba simahla ekupakeni ngemini, kodwa kukho umda kwinani leemoto kuxhomekeke kwindawo leyo.
Yonke indawo yokupaka yabasebenzisi iya kuhlawuliswa.
Iindawo zokuhlambela ezininzi ezinamavili ezinamavili zihlala kumgangatho wokuqala nowoku-1 kumgangatho osezantsi nakwiholo enkulu (kumgangatho wokuqala).
Ukuba ungena kwindawo yokupaka engaphantsi komhlaba, nceda usebenzise ilifti.